Ukoyikeka Okuvela Elwandle Kuhlasela Ukuthuthumela 'KwiNdlu Yaselwandle'
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	Ukoyikeka Okuvela Elwandle Kuhlasela Ukuthuthumela 'KwiNdlu Yaselwandle'
by UTimothy Rawles Julayi 6, 2020
by UTimothy Rawles Julayi 6, 2020 1,598 imbono
Ukududuzela sele kunika Ababhalisi banomxholo omkhulu ngexesha lobhubhane kwaye kule veki akukho ngaphandle. I-horror streamer isetelwe ukukhutshwa Indlu yasebhishi ngoJulayi 9.
Kule creeper yendalo esingqongileyo, sifumana uEmily noRandall bethatha uhambo lokuya kwipropathi yosapho lwaselwandle:
“Uhambo lwabo lokuya ngaphandle kwesizini luphazanyiswe nguMitch noJane Turner, isibini esikhulileyo esiqhelene notata kaRandall owahlukene naye. Ifom yeebhondi ezingalindelekanga njengoko izibini ziyekelela kwaye zikonwabele ukwahlulwa, kodwa yonke into ithatha ithuba elothusayo njengoko imeko ezothusayo zokungqongileyo ziqala ukoyisa ubusuku bazo obunoxolo. Njengokuba iziphumo zosulelo zibonakala, uEmily uyasokola ukwenza intsingiselo yosulelo ngaphambi kwexesha. ”
I-trailer, elandela ngezantsi, inemvakalelo yazo zombini Into kwaye Ukuhlaselwa kweBhunga labaQambi.
UMlawuli uJeffrey A. Brown unemvelaphi yokujonga indawo kwaye wasebenzisa eso sakhono ukuseta imeko Indlu yasebhishi. Ngapha koko, wayefuna ukwenza umboniso bhanyabhanya obhiyozela ukusetyenziswa kweCronenburg ngendlela eyoyikisayo yomzimba, enomdaniso kaJohn Carpenter, “kunye neli cosmic yamabali e-HP Lovecraft.”
UBrown uthi kwingxelo malunga nefilimu:
“IBeach House lilinge lokuba nengxoxo ethe ngqo nethembekileyo nabaphulaphuli. Ndifuna ukuthatha into endivakalelwa kukuba ilahlekile kwiimovie ezoyikisayo kwaye ndiyijoyishe kwiskripthi kunye nesicwangciso semveliso. Ukuxhalaba kwam malunga nokuqala kwe-apocalypse yendalo kwandinika isithuthi esoyikeka, ngelixa umdla kwinzululwazi yendaleko waba sisiseko sebali. ”
Indlu yasebhishi ifika nge-Shudder kaJulayi 9.